Kedu ihe bụ CPM? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na C	» CPM
CPM bụ okwu mkpọ okwu maka Ọnụ-kwa-mile.
Cost-per-Mile (ma ọ bụ ọnụ ahịa kwa otu puku) bụ ụzọ ọzọ ndị mbipụta na-eji akwụ ụgwọ maka mgbasa ozi. Usoro a na-akwụ ụgwọ maka echiche 1000 (M bụ ọnụọgụ Rome maka 1000). A na-ana ndị mgbasa ozi ụgwọ maka oge ọ bụla ahụrụ mgbasa ozi ha, ọ bụghị ugboro ole a pịrị ya.